အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: သတိရနေတဲ့ မီးထွန်းပွဲတော်
30 Responses to “သတိရနေတဲ့ မီးထွန်းပွဲတော်”
အဝေးရောက် သားသမီးတွေနဲ့ မိဝေးဖဝေးရွှေတွေအဖို့ မနက်ဖန်က ဘယ်လိုနှစ်သိမ့်ပေးပါ့မလဲနော်:(
လွမ်းစရာလေးပဲ ချောရေ ...
ဒီအချိန်ဆို ... မြန်မာပြည်ကို လွမ်းနေကျ ... ချောက ပိုလွမ်းအောင် လုပ်ရက်တယ်။
ရေးထားတဲ့ ဟင်းတွေကလဲ စားချင်စရာတွေချည်းပဲ။ မယ်ဇလီဆန်လှော်ဟင်း၊ ငှက်ပျောအူနဲ့ ငါးချဉ်သုတ်၊ ဟင်းပေါင်းဟင်းလှော်၊ မျှစ်ချဉ်လှော် အဲဒါတွေစားဖူးချင်လိုက်တာ။
ချောတို့ ဒေသ သီတင်းကျွတ်က ပျော်စရာ ကောင်းလိုက်တာနော်။
ိသီတင်းကျွတ်မီးထွန်းပွဲတော်က မီးရောင်တွေကတော့ အမြဲလှနေတယ်လို့ ထင်တယ်။
မိုးမလွတ် လေမလွတ် သီတင်းမကျွတ်နိုင်တော့ဘူး ချောရေ
မိုးတဖျောက်ဖျောက်နဲ့ သီတင်းကျွတ်နဲ့ကို မတူဘူးဆို
စာဖတ်ပြီးတော့ မိုးထဲမှာ ပိုလွမ်းသွားပြီ
:((( သီတင်ကျွတ်ကို လွမ်းနေတာကြာပေါ့....နှစ်တွေကြာနေပြီအမချောရဲ့ :(
နေ့တိုင်း သီတင်းကျွတ်ချင်လိုက်တာ။ အမြဲတမ်း လင်းထိန်ပြီး ပျော်စရာကြီးပေါ့။
အိမ်ပြန်ချင်တယ် ချောရယ် ... သီတင်းကျွတ်နဲ့မဆုံတာ ၆နှစ်ရှိပြီး(
ငယ်ငယ်တုန်းက ပျော်ခဲ့တာတွေကို သတိရလိုက်တာ......
ဒေသ ဗဟုသုတလေးဖတ်သွားပါတယ်၊ သီတင်းကျွတ် လူကြီးတွေကို လိုက်ကန်တော့ပြီး မုန့်ဖိုးတောင်းတာ သတိရမိပါတယ်၊
သီတင်းကျွတ်ပြီ..။ ကဲဘယ်လိုလဲ.. ယောင်းယောင်း :D
ကချင်ပြည်နယ်က မီးထွန်းပွဲတော်က တော်တော်ပျော်စရာ ကောင်းတာပဲနော်။ လသာညတို့မြို့လည်း ဆီမီးတစ်ထောင်လွှတ်တယ်လို့ဆိုပြီး မြစ်ထဲမှာ မီးခွက်လေးတွေ မျောတယ်။ အဲဒါကို မြို့လုံးကျွတ် ကမ်းပါးကနေ ထိုင်ကြည့်ကြတာ ပျော်စရာကြီး။ လွမ်းတောင် သွားပြီ..
မြစ်ကြီးမှာနေတုန်းက သီတင်းကျွတ်ရင် ဘယ်လိုတွေလုပ်ကျမှန်း မှတ်တောင်မမှတ်မိတော့ဘူး။ ဟုတ်ပ....မမတို့သီတင်းကျွတ်က တော်တော်ပျော်ဖို့ကောင်းတာပဲ။ ဒါတွေထားလိုက်ပါ....မေးချင်နေတာက သိတယ်ဟုတ်.... :D
ချောင်းထဲမှာ ဆီမီးခွက် မျှော တာတော့ တော်တော်လှမှာသေချာတယ်။
နေရာဒေသခြင်း မတူပေမယ့် လူကြီးမိဘကို ရိုသေလေးစား ဂါရဝ ပြုတာကတော့
မြန်မာပြည်ရဲ့ ချစ်စဖွယ် ဓလေ့ပါပဲ။
မီးထွန်းပွဲမှာတင်ပဲ လူငယ်တွေရဲ့ ရင် ခုန် စဖွယ် ဇာတ်လမ်းလေးတွေလည်း ရှိမှာပဲနော်။
မီးထွန်းပွဲတော်ဆိုတော့ လာလည်တာပါ။... :D အလှအပတွေကို စာနဲ့ပုံဖော်ခံစားသွားပါတယ်။
ညီမ page ကိုလာလည်ပါဦး။ ဒီမှာတော့ Free e-card နဲ့ Halloween ပွဲလုပ်နေတယ်..
အခုတော့ သီတင်းကျွတ်ဆိုတာကို ကိုယ့်ဘာသာမှတ်ထားပြီး ပျော်နေရတယ်။
ဖားကန့်ဘက်က သီတင်းကျွတ်အကြောင်းကို ဒီပို့စ်ဖတ်မှ သိရတာပါ။ကျေးဇူးနော် ချောရေ။
မချောရေ သီတင်းကျွတ် ပို့စ်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါ။ ငယ်စဉ်ကလို သီတင်းကျွတ်နေ့မှာ မောင်နှမတွေ စုကစားချင်လိုက်တာနော်။ မချောလည်း ပျော်ရွှင်စရာ သီတင်းကျွတ် ဖြစ်ပါစေ.. :)
ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်ဒေသရဲ့ သီတင်းကျွတ်ပွဲတော်ကျင်းပပုံလေးကို လာဖတ်သွားတယ် ချောရေ။။ သီတင်းကျွတ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေနော်
ဒီနှစ် သီတင်းကျွတ် ဘာမှ မလုပ်ဖြစ်ဘူး အစ်မ
အဟမ်းး အဟမ်းးး အပျိုဂျီး သီတင်းကျွတ်ပြီနော်
ချစ်လို့ စ တယ်နော်
Yeah. Tks so much.
ဘ၀မှာ အဲလိုပျော်စရာကောင်းတဲ့ သီတင်းကျွတ်မျိုးကို တခါမှ ကလေးဘာဝ လွပ်လပ်ပျော်ပါးခွင့်ရခဲ့ဘူးဘူး
မီးထွန်းပွဲတွေထဲက အလှ ဆုံး မီးပုံး ဆီမီးလေးတွေ ရှာကြည့် နေမိတယ်ဗျ၊ ဒါပေမဲ့ 
မတွေ့ ခဲ့ ဘူးလေ၊ အလှဆုံးကို..၊
အကုန်လုံး လှ နေလို့ ဗျိုး....။
မုဆိုးမလက်ဘက်ရွက် အဆိမ့်သုပ် ဆိုပါလား ! စားဖူးချင်လိုက်တာ
ရန်ကုန်မြို့တော်နဲ့ ကွဲပြားတဲ့ ကချင်ဒေသရဲ့ သီတင်းကျွတ်ပွဲတော်ကို စိတ်ဝင်တစား ဖတ်သွားတယ်။ ဒီလိုပို့စ်လေးတွေ ဖတ်ရတာ အရသာရှိတဲ့ ဟင်းကောင်းတစ်ခွက်စားရသလို ပြည့်စုံတင်းတိမ်မိတယ်။ ဗဟုသုတရတယ်။ မျက်လုံးထဲ ကွင်းကွင်းကွက်ကွက် ပုံဖော်မိတယ်။ မယ်ဇလီဆန်လှော်ဟင်း၊ ငှက်ပျောအူနဲ့ ငါးချဉ်သုတ်၊ ဟင်းပေါင်းဟင်းလှော်၊ မျှစ်ချဉ်လှော်.. ဂလု..။ :)
သီတင်းကျွတ်ပွဲတော် အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖတ်ရတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. ကျွန်တော်က ဖားကန့်ဇာတိမဟုတ်ပေမဲ့ အလုပ်အတွက်နဲ့ ဖားကန့်ကို လေးနှစ်လောက် နေခဲ့ဖူးပါတယ်.. ဖားကန့်ကနေ ပြန်လည်ထွက်ခွာပြီး တိုင်းတပါးကို ရောက်ခဲ့ရတာလည်း လေးနှစ်ပြည့်သွားပါပြီ.. မချောရေးထားသလိုပဲ ပျော်စရာကောင်းခဲ့ပါတယ်.. ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့တယ်ဆိုပါတော့ အဝေးရောက်ပြီး ဒါကိုဖတ်ကြည့်မှပဲ သီတင်းကျွတ်မှန်းသိရ သတိရမိပါတော့တယ်.. ကျေးဇူးပဲဗျာ အိမ်ကိုတော့ ပိုလွမ်းမိတယ်..
အဖေ့ကို လည်း လွမ်းတယ်။ အမေ့ ကိုလည်း လွမ်းတယ်။
ဒီ ပို့စ် လေးဖတ်လိုက်တော့ ရွာကို တန်းကနဲနေအောင် ပြေးပြီး ပြန်ချင်သွားမိတယ်။